Mogadishu Journal » 2018 » November » 10
Mjournal :-Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa soo gabagabeeyey booqashada uu ku joogay dalka Itoobiya. Madaxweynaha oo booqashadiisa maalinta shalay uga billaabatay magaalada Gonder waxuu shir seddex geesood ah oo ku saabsan danaha seddexda dal ee Soomaaliya,...
Mjournal :-R’iisalwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed, Madaxweynaha Soomaaliya Maxammed Cabdullaahi Farmaajo iyo Madaxweynaha Eretrea Isayas Afwerki. Ra’isal wasaaraha Itoobiya oo munaasabadda qelin jebinta khudbad ka soo jeediyey ayaa wuxuu sheegay in loo baahan yahay ardayda...
Mjournal :-Madaxweyne Muuse Biixi ayaa maanta isku shaandheyn kooban ku sameeyey golihiisa wasiiradda, waxaanu xilkii ka qaaday wasiirkii Maaliyada Yuusuf Maxamed, halka wasiirkii arrimaha dibada Sacad Cali Shire u magacaabay wasaarada maaliyadda. Sidoo kale, wasiirkii...
Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa si aad ah uga cabsi qabta in Danny Welbeck uu ka maqnaado illaa iyo xilli ciyaareedka inta ka dhiman, sidaas darteedna ay baadi goob ugu galeyso sidii ay beddelkiisa kusoo heli lahayd. Welbeck ayaa dhaawac halis ah uu kasoo gaarray kullankii...
Kooxda Manchester United ayaa Alexis Sanchez kasoo qaadatay kooxda Arsenal ka dib markii ay si kala beddelasho ah isu dhaafsadeen isaga iyo Henrik Mkhitaryan. Balse xaqiiqooyin ayaa tilmaamaya in Jose Mourinho bartlimaameedkiisa koowaad uusan ahayn weeraryahanka uu hadda heysto...
Mjournal :-War qoraal oo ka soo baxay Xafiiska Ra’iisal wasaare Kheyre Xassan Cali Kheyre ayaa waxaa looga hadlay qaraxyadii shalay ka dhacay Hotel Saxafi ee Magaalada Muqdisho. Ra’iisal wasaaraha Soomaaliya ayaa waxaa uu si kulul uu cambaareeyay qaraxyadaasi,...
Mjournal :-Daadad ka dhashay roobab xoogan oo ka da’ay dalka Jordan ayaa sababay dhimashada ilaa 9 ruux halka 3,700 dalxiisayaal ahna ay dowladda ku qasabtay in ay isaga tagaan Magaalada Petra ee dalkaasi si uu u yaraado khasaaraha ka dhalanaya daadadkaasi. Dalxiisayaashaani ayaa...
Mjournal :-Waxaa goor dhow soo dhamaaday shir saddex geesood ahaa oo Madaxda dowladaha Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea uga socday magaalada Bahar Dar ee dalka Itoobiya, iyadoo madaxda ay qaateen wada tashiyo qoto dheer oo saacado badan qaatay. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed...
Mjournal :-Sida wararka lagu helayo waxaa sii kordhay tirada dadkii ku naf waayay qaraxyadii shalay shabaab ay ka geysteen Magaalada Muqdisho. Wararka ayaa tibaaxaya in Khasaaraha ka dhashay qaraxyadan uu sii siyaaday ayna dhimashada gaareyso illaa 35 ruux, halka dhaawacana uu...
Mjournal :-Jimciyadda Qurumaha ka dhaxeyso afayeen u hadlay ayaa sheegay in ay aad kaga xunyihiin weerarkii shalay galab ee qaraxyada is xig xigay loo adeegsaday ee ka dhacay caasimada Soomaaliya. Afayeenkaani oo magaciisa lagu sheegay Farhan Haq ayaa sheegay in Xoghaayaha guud...
Mjournal :-Nin dhalinyaro Somali Australian ah oo la aaminsanyahay in uu ka tirsanyahay Daacishta ka dagaalanta Syria ayaa weerar loo adeegsaday Mindi ka geystay Magaalada Melporn ee dalkaasi Australia. Booliska dalkaasi ayaa warbaahinta u sheegay in ninkaasi oo magaciisu lagu...
Madaxweyne Trump oo Booqanaya Japan by Ahmed Cali - Sat May 25th 11:26:53
Madaxweyne Farmaajo oo lagu eedeeyay in uu sameeyay Jabhado hubeysan by Ahmed Cali - Sat May 25th 10:03:04
Xisbiga UPD oo war ka soo saaray xaalada maamulada Galmudug iyo Jubbaland by Ahmed Cali - Sat May 25th 9:35:51
Madaxweyne Farmaajo oo ka mid ah hoggaamiyayaal ka qeygalaya caleemo saarka madaxweynaha K/Africa by Ahmed Cali - Sat May 25th 7:42:25
Maxkamada ciidamada Qalabka sida oo Xukun dil ah ku riday Gacan ku dhiigle by Ahmed Cali - Sat May 25th 7:39:21